गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि सचिवसम्म कार्यालयमा भेटिदैनन् « News24 : Premium News Channel
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि सचिवसम्म कार्यालयमा भेटिदैनन्
कास्की । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री तथा कर्मचारीको हेल्चेक्र्याईंको कमि छैन । संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने प्रदेश सरकारमै देखिएको यो वेथितिले धेरै प्रश्न उठाइदिएको छ । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा विशिष्ट कर्मचारी नै विभिन्न बहानामा प्रदेश राजधानी बाहिर रहेको भेटिएको छ ।
कर्मचारी स्थायी सरकार हुन् । यही मान्यता कर्मचारीतन्त्रमा रहन्छ । नीति नियम लागु गर्ने विशिष्ट अधिकारी नै कार्यालय आउँदैनन्– यसले संघीय संरचनाको कार्यान्वयन कसरी होला ? प्रश्न उठ्छ । यतिवेला धमाधम काम गर्र्दै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दायित्व प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवको नै हो । तर, गण्डकी प्रदेशमा तीन वटा मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिव बाहेक अन्य सचिव विभिन्न वहानामा प्रदेश राजधानी बाहिर छन् ।
उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री– विकास लम्साल– थाइल्याण्ड भ्रमणमा
प्रमुख सचिव– लक्ष्मीराम पौडेल–चीन भ्रमणमा
मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव–धर्मराज कुँइकेल–चीन भ्रमणमा
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव–विष्णु ढुंगाना–चीन भ्रमणमा
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सचिव–शरदचन्द्र श्रेष्ठ– श्रीलंका भ्रमणमा
एक मन्त्री सहित तीन सचिवको विदेश भ्रमणबारे सरकारलाई जानकारी छ । तर, केही सचिव बारे सरकारका अधिकारीहरु केही बताउँदैनन् । उनीहरु निजि कामले राजधानी बाहिर रहेको बताइएको छ ।
प्रदेश राजधानी बाहिरः
मुख्यमन्त्री– पृथ्वीसुब्बा गुरुङ– काठमाडौंमा
मन्त्रिपरिषद्का सचिव– विष्णु ढकाल– पोखरा बाहिर
सामाजिक विकास सचिव–कृष्णकुमारी न्यौपाने– निजि भ्रमणमा
यी राजधानी पोखरा बाहिर रहेका मन्त्री तथा सचिव हुन् । पोखरामै भएका मन्त्री पनि कार्यालयमा भेटिदैनन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा शुक्रबार कार्यालयमै थिएनन् । प्रायः मन्त्री तथा सचिव सामान्य कार्यक्रममै समय व्यतित गर्न लालायित देखिन्छन् । अधिकांश सांसद पनि पोखरामा भेटिदैनन् । कानून बनाउने र विकासका कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने बेला मन्त्री तथा सांसद र कर्मचारीको उदासिनताले के प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव होला ? आम जनता प्रश्न गर्छन ।